Sheekada filimka Spyder: Xiiso badanaa wada shaqeynta Mahesh Babu iyo Director AR Murugadoss | Filimside.net
Home » Sheekada Filimada » Sheekada filimka Spyder: Xiiso badanaa wada shaqeynta Mahesh Babu iyo Director AR Murugadoss
Sheekada filimka Spyder: Xiiso badanaa wada shaqeynta Mahesh Babu iyo Director AR Murugadoss
Taariikhda: September 28, 2017
Sypder waa filimka labaad ee ugu weyn sanadkaan Telugu sameeyeen kadib Baahubali 2 dhanka miisaaniyada iyo hadal heynta madaama ay ku midoobeen labada awooda badan Suldaan Mahesh Babu iyo Director AR Murugadoss.
Spyder waa filim labo luqadood hal mar lagu sameeyay Telugu iyo Tamil sidoo kalena lacago qaali ah lagu qarash gareeyay waxaa intaas u dheer in hab casri ah loo sameeyay.
Jilaayaasha Spyder: Mahesh Babu, Rakul Preet Singh, SJ Suryah, Bharath, RJ Balaji, Shaji, Priyadarshi, Sayaji Shinde, Jayaprakash
Muxuu ku wanaagsan filimka Spyder: Bandhiga Mahesh Babu, Action-ka heerka sare, qaabka sirdoonka baaritaankiisa loo dhigay iyo jiheenta sheekada Director AR Murugadoss
Filimka Spdyer muxuu ku liitaa: Qaybta dambe ee filimkaan oo xoogaa dayacaad ka muuqato, awooda oo faraha loogu shubay Mahesh Babu waayo caawiyaasha filimkan door adag lama siinin iyo mararka qaar aalada VFX oo aan si wacan loo adeegsanin.
Maxaa Loo Daawan Doonaa Spdyder: Inaba caadi ma ahan wada shaqeynta Mahesh iyo Director AR Murugadoss waayo waxay la imaadeen filim dheeli tiran kuna muujiyeen inay haboon tahay mustaqbalka dhow inay marwalbo isla shaqeeyaan.
Fariinta Filimka Spyder oo kooban: Spyder, Shiva (Mahesh Babu) waa nin ay ka go’antahay inuu dadka caawiyo asigoo ka shaqeeyo shabakad dhageesato taleefoonada dadka dhibanaha ah kadibna dabagalo kuwa shacabka dhibaatada ku hayaan.
Inkastoo ay sharci daro tahay in la dhageesto taleefoonada shacabka hadana waaxda sirdoonka hadafkeeda wuxuu yahay oo kaliya shacabka sida qarsoon loo dulmiyo inay u gar gaaraan hawshaasna waxaa qabto si daacadnimo iyo xeelad ku dheehan Spyder, Shiva (Mahesh Babu).
Spyder, Shiva (Mahesh Babu) hal taleefoon oo uu dhibane xaalad adag ku jiro usoo diro ayaa ku xiraayo Sudalai (SJ Suryah) oo ah nin isaga bil cagsi ku ah kaasi oo aan dadka u nixin xeelad badan awood ahaana aan la loodin karin.
Sudalai (SJ Suryah) waa sheydaan dadka naxariista ka qaado si toos ah iyo si dad badn maarana loo waayay in xal loo heliyo dhibaatada uu shacabka ku haayo hadaba Spyder, Shiva (Mahesh Babu) siduu kaga taqalusi karaa sheydaan meelo badan awood ku leh?
Maxaa Laga Yiri Qaabka Sheekada uu Director AR Murugadoss U Dhigay: Filim sameeyahan waa ruug cadaa Tamil iyo Bollywood ka dhaxeeyo wuxuuna sameeyay aflaan waa weyn sida Ghajini, Holiday, Thuppakki, Ramanaa iyo aflaan kale oo hirgaleen.
Markaan kama uusan bixin xeen daabkii lagu yaqiinay oo ah Action iyo qayaano isku dheehan weliba si wacan ayuu u dhigay doorka Mahesh Babu iyo sheekada filimkaan isku xir ahaan laakiin wuxuu dayacay dhamaan jilaayaasha kale ee filimkaan ku jiraan sidaa darteed Spyder ma noqonin filimkiisa ugu wanaagsan ee waa filim isku xir ahan dhex dhexaad ah marka lala bar bar dhigo shaqooyinkiisii quruxda badnaa ee uu horey u qabtay.
Halka saac ee hore sida Spyder dadka u caawiyo kiisaskana u daba galo inaba caadi ma ahan balse halka saac ee dambe xoogaa caajis iyo dayacaad ayaa ka muuqato laakiin wax walbo bandhiga Mahesh ayaa ku hilmaan siinayo.
Bandhiga Jilaayaasha: Mahesh Babu wuu soo laabtay waana hubaal Spyder inuu bandhig ahaan ka mid noqon doono aflaantiisa ugu xiisaha badan, taageerayaashiisa dhawaanahan niyad jabnaa sacabka dib ayay usoo celin doonaan waayo xarako, Action iyo jiliin heer sare ah ayuu Mahesh la yimid.
Si kooban waxaa loo dhihi karaa ruuxda filimka Spyder waa Mahesh Babu oo muujiyay inuu yahay Super Star u baahan kaliya helitaanka door ku haboon maqaamkiisa kadibna wax celin karo malahan.
SJ Suryah laadarka filimkan waa qofka labaad ee Mahesh kusoo xigo isagana door uu ku haboon yahay ayaa la siiyay wuxuuna u matalay si uu amaan weyn ku heli doono.
Waxa ugu weyn ee ku niyad jebinaayo ayaa ah atirishada Telugu laga jecel yahay Rakul Preet Singh in filimkaan door wacan laga siinin waana arin lala yaabay in xidigtaan aad loo dayacay doorkeeda.
Gunanaad: Spyder waa flimkii ay Koonfur Hindiya u baahneeyeen iyo dadka xiiseeyaan filimada mada daalada dhameestiran leh, qaybta hore filimkaan waxaa loo sameeyay si caalami ah oo aan indha laga qaadi karin halka qaybta labaad dayacaad ka muuqato laakiin bandhiga Mahesh Babu ayaa wax walbo ku hilmaami doonaa meelaha uu filimkaan gaabiska ka yahay.
Kooxda filimada ka faaloodaan waxay siiyeen 3/5 sheekadiisa waxaana lagu siiyay qaybta hore si heer sare ah loo agaasimay iyo bandhiga taariikhiga ee Suldan Mahesh Babu sameeyay.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Spyder: